Ewebhu – Isigaba – Windows – Vessoft
Ewebhu – Windows
Ewebhu Chat Popular ithuluzi for imiyalezo, okwenza izingcingo futhi uhlela izingqungquthela zamavidiyo. Isofthiwe baxhumana nezinsizakalo ayethandwa Yahoo.
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Ithuluzi ukuxhumana nabantu emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba bakhulumisane video inkomfa mode futhi ukushintshanisa idatha.
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Isofthiwe ukugijima futhi aphathe akhawunti amaningi Skype on computer eyodwa kuphela. Isofthiwe kwenza kalula ukushintsha phakathi akhawunti nasekuxhumaneni in izingxoxo eziningana ngesikhathi esisodwa.
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Isofthiwe yokuhumushela imiyalezo angenayo naphumayo in Skype. Isofthiwe isekela amasevisi ethandwa wokuhumusha nge eziningi izilimi.
Ewebhu Chat Ukukhulumisana Voice Ithuluzi for umbhalo, izwi kanye video imiyalezo. Isofthiwe ikuvumela ukuba wabelane amafayela bese wengeza abasebenzisi oxhumana nabo kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Ewebhu An lula ukusebenzisa isofthiwe kwandisa amathuba of webcam yakho ngesikhathi nokuxhumana ezahlukene video izingxoxo noma izithunywa.
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Isofthiwe igxile zokuxhumana ephephile internet nge ematfuba okungenani yomuntu ukuvuza.